Tombontsoa ara-pahasalamana amin'ny menaka hash - Victor Mochere
Ny menaka Hash, fantatra ihany koa amin'ny hoe menaka tantely sy menaka rongony, dia nalaina cannabis misy THC be dia be. Fitsaboana ho an'ny olana ara-pahasalamana maromaro tsy misy voka-dratsiny kely na tsy misy vokany izy io, ary ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana dia manoro ny fampiasana azy. Na izany aza, firenena maro no mihevitra azy io ho tsy ara-dalàna, na dia eo aza ny tombontsoa ara-pahasalamana. Vokany, mbola tsy mahalala ny menaka hash sy ny tombontsoa maro azo avy aminy ny sasany. Ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny tombontsoa ara-pahasalamana amin'ny menaka hash.
Inona no atao hoe menaka hash?
Ny tombony amin'ny menaka hash
Ny menaka Hash dia fitrandrahana cannabis misy CBD sy THC be dia be. Antsoin'ny olona hoe menaka rongony na menaka tantely koa izy io, ary volontsôkôlà volamena na maivana no voalohany indrindra. Na dia manana tombony mitovy amin'ny vokatra cannabis hafa aza ny menaka hash, io no mahery indrindra satria misy 90% THC eo ho eo. Misy fomba fitrandrahana menaka hash maromaro; Na izany aza, ny ankamaroany dia misy solvent.
Ny sasany amin'ireo solvents ireo dia misy ethanol sy butane. Miankina amin’ny fomba famokarana ihany anefa ny fanomanana azy. Alohan'ny hividianana menaka hash dia tsara ny manamarina ny maha-ara-dalàna azy ao amin'ny faritra misy anao. Azonao atao ny mihinana menaka hash amin'ny alàlan'ny filalaovana, fifohana sigara, na vape. Azonao atao koa ny manosotra azy ireo amin'ny hoditra amin'ny toe-javatra manokana amin'ny hoditra.
Ireto ny tombontsoa azo avy amin'ny menaka hash.
1. Manala fanaintainana
Ny menaka Cannabis dia anana ho an'ny fanaintainana amin'ny ankamaroan'ny tokantrano satria mampihena ny fanaintainana eo no ho eo. Ny fikarohana isan-karazany dia nanaporofo ny fahombiazan'ny menaka amin'ny fitsaboana ny fanaintainan'ny neuropathique. Mety hanontany tena ianao hoe ahoana no fiasan'ny menaka cannabis amin'ny fanaintainana. Ny tsirairay dia manana rafitra endocannabinoid izay mifandray amin'ny toe-po, fahatsapana fanaintainana ary fahazotoan-komana. Ny menaka cannabis dia mifandray amin'ny endocannabinoid receptors ao amin'ny atidoha sy ny hery fiarovana. Ireo mpandray ireo dia mandray famantarana ary manampy ny sela mamaly, mamorona fiantraikany manamaivana ny fanaintainana.
2. Mampihena ny tebiteby ny menaka hash
Ny menaka Hash dia malaza amin'ny fampihenana ny tebiteby noho ny fananany mampitony. Izy io dia misy fitambarana voajanahary sasany mamoaka hormones izay manome fahatsapana mahafa-po. Ny iray amin'ireo fitambarana ireo dia THC, izay manampy amin'ny fanalana aina. Noho izany, ny menaka hash dia anana tena tsara ho an'ny fanahiana, ny tsy fahitan-tory ary ny soritr'aretin'ny PTSD. Ny fikarohana dia naneho famantarana ny fanahiana ambany kokoa taorian'ny fampiasana menaka rongony, ary ny fihenan'ny fitempon'ny fo sy ny soritr'aretina manan-danja hafa.
3. Manatsara ny toetry ny fo izany
Na dia tsy manasitrana ny aretim-po aza ny menaka cannabis, dia misoroka ny fahasimban'ny fo izany. Noho ny fananana anti-inflammatoire, ny menaka hash dia mampihena ny tosidra sy ny kolesterola. Noho izany, afaka mitazona lanja salama isika ary miaina fiainana salama. Ary koa, ny menaka hash dia manana fananana antioxidant izay afaka manampy amin'ny fitsaboana olana ara-pahasalamana manokana.
Maro ny fanadihadiana no naneho fa io menaka io dia misoroka ny aretim-po sy ny fahatapahan'ny lalan-dra, ary ny cannabis dia mampitony sy manitatra ny lalan-drà mba hivezivezy tsara kokoa. Saingy, ilaina ny mahafantatra fa tsy ny fanafody rehetra dia miasa tsara amin'ny cannabis. Noho izany, tsara kokoa ny manatona dokotera raha misotro zava-mahadomelina hafa alohan'ny hampiasana menaka cannabis.
4. Mitsabo kansera sasany ny menaka hash
Iray amin'ireo aretina manimba indrindra ny homamiadana, tsy misy fanafodiny na kely aza. Na izany aza, ny mpahay siansa dia nanaporofo fa ny cannabis dia afaka manakana ny fitomboan'ny sela homamiadana. CBD dia naneho fiantraikany tsara tao amin'ny laboratoara. Ny menaka cannabis dia afaka manova ny fomba fiforonan'ny sela homamiadana ary mampihena ny fivontosana. Ity misy lisitry ny voka-dratsin'ny menaka cannabis amin'ny homamiadana.
Manakana ny fizarazaran'ny sela homamiadana ny menaka cannabis
Mahatonga ny fahafatesan'ny sela homamiadana izany
Manakana ny fantson-dra tsy hitombo ho tumors koa izy io
Farany, manakana ny sela tsy hiparitaka manerana ny vatana
Ireo rehetra ireo dia porofo lehibe fa hisy fiantraikany amin'ny fitsaboana homamiadana ny cannabis amin'ny hoavy akaiky indrindra.
5. Mitsabo aretina hoditra sasany izy io
Ny menaka cannabis dia malaza amin'ny fitsaboana aretina hoditra sasany toy ny akne. Ny fananana anti-inflammatoire dia manampy amin'ny fitsaboana ny akne, ny mangidihidy ary ny fahamainana, ka tsy mamela takaitra. Azonao atao ny manosotra azy amin'ny faritra voakasika na mampiasa azy io amin'ny toerana misy azy. Na izany aza, manampy amin'ny fampiroboroboana ny hoditra salama izy io amin'ny alàlan'ny fandatsahana ny selan'ny hoditra efa antitra ary manolo azy ireo amin'ny sela hoditra vaovao. Ary koa, ny cannabis dia manana fananana antibacterial sy antifungal. Noho izany dia manasitrana izay aretina rehetra amin'ny hoditra izy io.
Manana tombony ara-pahasalamana maromaro ny menaka hash. Raha mijaly amin'ireto fepetra voatanisa ireto ianao dia mety ho vahaolana farany ny menaka hash. Na izany aza, ny faritra misy anao dia tsy maintsy mihevitra ny cannabis ho vokatra ara-dalàna alohan'ny hampiasana azy. Tsidiho koa ny dokotera mba hahalalanao raha tsy manisy ratsy anao ny fampiasana menaka hash.